Inkolelo-mfundiso yokuba uMthandazo uvinjelwe kwiSikolo soLuntu
Abafundi abavunyelwe ukuthandaza kwisikolo sikarhulumente.
Eqinisile, abafundi mabavunyelwe ukuthandaza esikolweni-kwaye ba! Abanye abantu benza kwaye baphikisana ngokungathi abafundi abavunyelwe ukuthandaza esikolweni, kodwa akukho nyaniso kule nto. Eyona ndlela, badideka umahluko phakathi kwemimiselo esemthethweni, exhaswe nguRhulumente, imithandazo yelizwe ekhokelwa ngamagosa esikolweni kunye neminye imithandazo yangasese, yaqala kwaye yathi ngumfundi.
Okubi kakhulu, abantu bayakhohlisa ngamabango abo.
INkundla ePhakamileyo ayizange ibambe ukuba abafundi abakwazi ukuthandaza esikolweni. Kunoko, iNkundla ePhakamileyo iye yalawula ukuba urhulumente akakwazi ukwenza nantoni na ngomthandazo kwizikolo . Urhulumente akakwazi ukuxelela abafundi ukuba bathandaze. Urhulumente akakwazi ukuxelela abafundi ukuba bathandaze. Urhulumente akakwazi ukuxelela abafundi ukuba bafanele bathandazele. Urhulumente akakwazi ukuxelela abafundi ukuba umthandazo ubhetele kunokuba ungabi nomthandazo.
Oku kuvumela abafundi inkululeko eninzi-inkululeko enkulu kunokuba babe nayo "ezintle iintsuku ezindala" ezininzi ezinokwenkolo ezibonakala zifuna ukuba iMelika ibuyele kuyo.
Ngoba? Ngenxa yokuba abafundi banokugqiba ukuthandaza ukuba bafuna nini ukuthandaza xa besenza, kwaye banokugqiba isigqibo malunga nomxholo wabo wemithandazo yabo. Akuhambelani nenkululeko yenkolo ukuba urhulumente enze ezo zigqibo kwabanye, ngakumbi abanye abantwana babantu.
Kuyamangalisa ukuba abagxeki balezi zigqibo baye bazama ukuphikisa ukuba abagwebi akufanele bakwazi ukuthetha "nini na apho" abantwana kufuneka bathandaze xa kulandelelaniswa nento eyenzekayo: abagwebi baye balawula ukuba kuphela abafundi abafanele bakwazi ukugqiba xa , phi kwaye baya kuthandaza njani. Imithetho echaphazelekayo yilabo abaye babenzela ukuba abafundi baxelele le micimbi-kwaye zezi zigqibo ezenziwa ngabasebenzi bezenkolo.
Izikolo & Imithandazo Yobungcali
Enye yezinto eziqhelekileyo i-buzzword ibe "imithandazo yezintlu". Abanye abantu bazama ukuphikisa ukuba kuyamkeleka ukuba urhulumente akhuthaze, avume kwaye aqhubekele imithandazo kunye nabafundi besikolo sikarhulumente ngokude nje ukuba loo mithandazo "iyingcali." Ngelishwa, uhlobo oluchanekileyo lwento abantu bathetha ngayo ngokuthi "ngongqongqo" alucacanga. Ngokuqhelekileyo kubonakala kuthatha kuphela ukususwa kweembonakaliso kuYesu, ngaloo ndlela ukuvumela ukuba umthandazo kubandakanyeke kumaKristu nakumaYuda-kwaye mhlawumbi amaSulumane.
Umthandazo onjalo awuyikuba "uququzelelekileyo" kumalungu angokwenkolo engekho eBhayibhileni. Akuyi kuba luncedo kumaBuddha, amaHindu, amaJayin kunye namaShintos, umzekelo. Kwaye akukho mithandazo inokuthi "ibandakanyeke" kubantu abangakholwayo abangenanto yokuyithandaza. Imithandazo kufuneka ibe nemixholo, kwaye kufuneka ibe nekhokelo. Ngaloo ndlela, umthandazo oyedwa kuphela "ongumnqweno" ongenamthandazo kuyo yonke into - yintoni imeko esiyiyo ngoku, engenakho imithandazo ephakanyiswayo, eyavunyelwa okanye ehokelwa nguRhulumente.
Izilungiso kuMthandazo weSikolo
Kuyinyaniso, ngelanga, ukuba bekukho abalawuli abathandekayo besikolo abaye bahamba kakhulu kwaye bazama ukwenza okungaphezu kweenkundla ezigunyazisiweyo. Ezi mpazamo - kwaye xa zinzima, iinkundla zifumene ukuba inkululeko yezenkolo kufuneka igcinwe.
Oku akuthethi, nangona kunjalo, akukho zithintelo ngendlela kunye nexesha lokuthandaza .
Abafundi abakwazi ukuxhuma phakathi kweklasi baze baqale ukukhala njengengxenye yomthandazo. Abafundi abakwazi ukufaka imfesane kwenye imithandazo kwenye into ethile , njengentetho eklasini. Abafundi banokuthandaza ngokuthula kwaye bathule naluphi na ixesha, kodwa ukuba bafuna ukwenza okungakumbi, ke abanako ukwenza ngendlela ephazamisa abanye abafundi okanye iiklasi kuba injongo yezikolo kukufundisa.
Ngoko ke, ngelixa kunemiqathango emincinci emincinci kunye neengqiqo ezinokuthi abafundi bahambe ngayo ngokusebenzisa inkululeko yabo yonqulo, inyaniso ihlala inokuba inkululeko enkulu yonqulo kwizikolo zethu zikarhulumente . Bangathandaza ngokwabo, banokuthandaza ngamaqela, banokuthandazela bodwa, kwaye banokuthandaza ngokuvakalayo.
Ewe, banako ukuthandaza ezikolweni.
Iiminyaka ezili-70 zeeMillion zokuPhathwa kweMvelo
Indlela Yokufunda I-Morse Code
I-Black Church: Impembelelo yayo kwiNkcubeko yeNnyama
Amafilimu aphezulu ama-Steven Seagal
Umgudu weThala leencwadi kwiDunhuang - i-Buddhist Scholarly Cache
Kutheni Ufanele Uhlambulule Izandla Zakho (Nokwenza Kanjani)
Top Hitated Hitters (DH) kwi-Baseball History